Keelloon halluu iccitii jabaa qabuu dha: Free all political prisoners in Oromia/ Ethiopia – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsKeelloon halluu iccitii jabaa qabuu dha: Free all political prisoners in Oromia/ Ethiopia
Keelloon halluu iccitii jabaa qabuu dha. Ergaa gurguddaa lama qaba. Gama tokkoon mallattoo nagaa fi abdii ti. Birraan yoo bari’u keellootu daraara. Maqaan kunuu halluu daraaraa keelloo sanirraa dhufe. Daraaraan keelloo mallattoo dukkanii fi bacaqiin gannaa darbee birraan bari’uuti. Daraaraan keelloo ni urgaaha. Miira gammachuu fi jaalalaa namatti uuma. Kanniifni illee daraaraa kana nyaattee dammeessiti. Kanaafuu keelloon mallattoo abdii, jaalala, mi’aayinaa fi nagaa ti.
Gama biraan akka afaan addunyaatti keelloon mallattoo akeekkachiisaa ti. Kan karaa irraa maqe akka karaatti deebi’u kan ittiin akeekkachiisan. Itoophyaa fi sirni ishii akeekkachiisa akkasii fudhachuurra geessee jirti. Akeekkachiifni kun ‘qabbanaahu harka gubu fal’aana’ ergaa jedhu dabarsuus ni danda’a. Oromoon Itoophiyaa keessatti warra manni hidhaa qofti afaan isaa dubbatu tahee itti fufuu akka hin dandeenye akeekkachiisa.
Kanaafuu keelloon mallattoo sabboontota Oromoo ti. Mallattoo qabsoo yeroo kanaati. Agarsiiftuu haala yaaddessaa biyyattiin keessa jirtuu ti. Gama biraatiinis ammoo mallattoo abdii birraan dhugaa bari’uuti.
#Freeallpolitical prisoners in Ethiopia
Justice system in Ethiopia is already broken as it is being politically motivated. Wajjirri poolisii ajaja mana murtiitiif bitamuu dhiisee, qaama birootiin yoo ajajamu, anarchy’n akkanaa uumama. Rakkoon kuni hatattamaan hin furamu taanaan, kufaatii sirna mootummaa qofa osoo hin taane, biyyaattii tanas gara kufaatiitti geessa. Kanaafuu, warra mootummaatiif rakkoo kana furuu jechuun warra paartii siyaasaa hogganan kana gargaaruu osoo hin taane sirna bulchiinsa biyya kanaa gara kufaatii biyyaa qajeelaa jiru kana baraaruudha. Itti yaadaa!!!
Gara biraatiin ammoo, haala namoonni hedduun hidhaa-siyaasawaa keessa jiran kanaan filannoon bilisaa biyya kana keessattii akkamitti adeemsifamuu dandahamaa?????
The good news for the prisoners is, ummanni isin wajjiin jira waan ta’eef dhugaan teessan hin baddu!!! Nutis qaamaan baane malee qalbiin hanga dhumaatti isin wajjiin jirra!!! Rabbi isin wajjiin haajiraatu. Dhugaaf jettanii dararamaa jirtanii dhugaan isin haa tindhistu.
Oromoo dubbiin jirtu nama shakkisiifti shakkuunis gaariidha. Qaroowwaan keenna Qaaman, yaadan waan humnaa kamiinu haa eeggannu Jawar Mohammed faa torbee kana dhaddacha qabu. Yoo dandeette Jawar ajjeesuf nama iccitiin afaan Amhaaratiin obbolaan koo barreesse keessaa na dhaqqabe jedhu tokkoo akka barreessetti Hayyoota teenna Himatni heedduun irraa haqamuun ni beekama. Muummichi Ministeera dhibamee, du’e oduun jettu yoo dandahaan Jawar ajjeesuuf yaada yaadan keessaa Opireeshinii ajjeechaa isaa waliin kan wal qabate tahuu dubbatamaa jira.
Abiyyi Ahmed jiraachuu Keelloo Miidiyaa oduu isaa keessatti gabaasee jira. Namichi kun shira guddaan akka bahuuf qophaaye maddeen hedduun gabaasaa jiru. May be akka tasaa ajjeechan kun milkaahe taanan “Ani dhibamee ture garuu isa hiikuf yaanne turre” jedhee oduu barate sana miidiyaan as bahee ololuuf afaan isaa soogiddaan dhiqee ololuuf qophii akka xumureedha. Namni kun ammallee ummata morma gadi nu cabsuuf socho’aa akka jiran dubbatame.
Jawar ajjeesuf kana duras yaalii godhanii turan akka Rabbiitif hafne akka inni ajjeefamu gareen badhaadhinaa ADP fi namicha hamaa Isaayas sunis akka keessa jiru himamaa jira. Waan hafeen dhibeen Abiyyi Ahmed akka haasayamu hangana maraa miti namichi kuni dhibee sammuutin akka dhibamu gaafiin hin jiru.
Inni nama fallaa isaa hunda ajjeeses tahe hidhee hooggansa isaa itti fufsiisuu akka barbaadu shakkiin takka hin jiru. Namni kun aadaa barbadeesse baduu kanaan nama beekamuudha. Waanuma maraafuu xiyyeeffannoon of eeggannoon guutame barbaachisaadha. Rabbiin nu haa eegu.
Namni wohii naaf himaa what does this mean?